မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမူတွေအပေါ် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမူတွေ ပိုပိုပြင်းထန်လာချိန်မှာ၊ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား (Independent Investigative Mechanism for Myanmar - IIMM) အကြီးအကဲက၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မူမှတ်တမ်းများစွာကို လက်ခံရရှိထားပြီးပြီမို့၊ တာဝန်ရှိသူတွေ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူ ကျူးလွန်နိုင်တာကို ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါပြီလို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်ခုံရုံးတွေမှာ တရားစွဲနိုင်ချိန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး၊ ဒီမှတ်တမ်းတွေ ဆက်လက်စုဆောင်းနေရာမှာ၊ မြန်မာနိုင်ထဲ ဝင်ခွင့်မရချိန် ပြည်ထဲကနေ ပို့ပေးသူတွေကို၊ IIMM အဖွဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian က ချီးကျူးလိုက်ပြီး၊၊ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တော့၊ လူသေအလောင်းလို အထောက်အထားတွေကို ဖျောက်ဖျက်နေတာကိုက အပြစ်ရှိတဲ့ သက်သေခံချက် ဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရှေ့ နေကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Mr. Koumjian က၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူဆိုင်ရာ တရားမျှတမူ ဖော်ဆောင်ရေးက၊ သက်တမ်း ဘယ်တော့မှမကုန်ဘဲ၊ အမြဲအမှတ်ရစရာတွေ ကျန်နေခဲ့မှာမို့၊ တာဝန်ရှိသူတွေ တချိန်ချိန်မှာ အရေးယူခံရနိုင်တာကို၊ သတိပြုထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက သီးသန့်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ IIMM အဖွဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Koumjian ခင်ဗျာ၊ အလုပ်တွေ များနေတဲ့ကြားက၊ VOA ကို အခုလို အချိန်ပေးပြီး၊ သီးသန့်အင်တာဗျူး ကိုယ်တိုင် ဖြေပေးတဲ့အတွက်၊ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဒီ IIMM မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရားကို တကယ်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာထဲက၊ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ အရင်စစချင်းတုန်းကတော့၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အဓိက ဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ကြီးလေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူ အချက်အလက်တွေကို ကောက်ယူစစ်ဆေးပေးဖို့ဆိုပြီး စဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်၊ ဒါပေမဲ့ အခုတော့၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက် စစ်အာဏာသိမ်းအပြီး၊ မြန်မာပြည်က အဓိကမြို့ ကြီးတွေအပါအဝင်၊ တတိုင်းပြည်လုံးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လတ်တလော ဖြစ်လာနေတဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူ အချက်အလက်တွေ ကောက်ယူမှာဆိုတော့၊ အခုတစ်ခေါက်မှာ ထိရောက်လာနိုင်မူ အလားအလာကို ဘယ်လို မျှော်မှန်းမိလဲ။
ဖြေ ။ ။ IIMM ရဲ့ထိရောက်မူက အခြေအနေ အများကြီးပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ ဒါတွေက ဆုံးဖြတ်လို့ မရသေးပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ကို ကျော်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှိထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကတော့၊ အထောက်အထားတွေ ကောက်ယူမယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေချိုးဖောက်မူတွေအပေါ် အရေးယူနိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် တနေ့နေ့မှာ အရေးယူဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့၊ ပြည်တွင်း (ဒါမှမဟုတ်) နိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေအတွက်၊ အသင့်၊ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးထားမယ်။ အခု ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ထဲမှာ ရောက်နေပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ကောက်ယူလာနေပါတယ်။
မေး ။ ။ တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးပါ။ အဲ့ဒီတော့ အခုလို အချက်အလက် ကောက်ယူတာမှာ၊ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားမျိုး ရဖို့ဆိုတာက၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကိုသွားပြီး၊ ကောက်ယူနိုင်ရင် ပိုအားကောင်းနိုင်တာပေါ့နော၊် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာက၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်ခွင့်ရောက်ခွင့်ကို လက်ရှိ စစ်ကောင်စီကလည်း၊ ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့၊ ဘယ်လို စိန်ခေါ်မူတွေ ရင်ဆိုင်နေရလဲ။
ဖြေ ။ ။ သေချာတာပေါ့ အခုလို ကောက်ယူဖို့အတွက် ခက်သွားပါတယ်။၊ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူ မရှိတာကြောင့်၊ ကျနော်တို့ အခက်ကြုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံထဲကို မသွားနိုင်ဘူး၊ ရာဇဝတ်မူ ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့နေရာတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ရှိနေသေးတဲ့ သက်သေတွေကို လက်လှမ်းမမှီနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို လာခွင့်ပြုဖို့တော့၊ ဆက်လက်တောင်းဆိုထားဆဲပါ။ ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကလည်း ဒီအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ မြန်မာဘက်ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမြဲမမေ့ရမှာက၊ အခြေအနေတွေက အမြဲပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အခုအရေးတကြီး လုပ်ဖို့လိုတဲ့၊ အထောက်အထားကောက်ယူ၊ သိမ်းဆည်းမူလုပ်ငန်းကို၊ ရေရှည်တွက်ပြီးတော့ကို လုပ်နေတာပါ၊။
မေး ။ ။ အခုလို ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာဆိုတော့၊ ဘယ်တော့လောက်မှာပေါ့နော်၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုရော၊ ဘယ်လောက်ထိ၊ မျှော်လင့်ထားလဲ၊ နိုင်ငံတကာရှေ့ နေကြီး Koumjian ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကလည်း၊ တခြားအချက်တွေ အများကြီးပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျော်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပေးဖို့၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ် အတွင်း အခြေအနေမျိုးစုံအောက်မှာ တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ အလားတူ ဆက်တောင်းဆိုသွားမှာပါ။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲ့ဒီတော့ အခုလက်ရှိ ဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်၊ ဘယ်လို သက်ရောက်မူတွေ ရှိနေပြီးတော့၊ ဘယ်လို ရှေ့ ဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ရော၊ ပြင်ဆင်ထားပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို သွားခွင့်မရတာက အခက်အခဲ ပိုဖြစ်စေတာ ရှင်းပါတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ နယ်မြေတွေ၊ အချိုးဖောက်ခံရသူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မရတဲ့အခါကြတော့လေ။ ဒါပေမဲ့ အခုလို ဖြစ်တာက နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူဥပဒေကြောင်းမှာ ထူးထူးခြားခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူ မရှိတဲ့အခါ၊ နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမူအတွက် ကြိုးပမ်းမူတွေ အခက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ မဟာဗျူဟာနည်းသစ်တွေနဲ့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အခုက၊ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်း ထောင်ဂဏန်းတွေနဲ့ ချီပြီးကို၊ အထောက်အထားတွေ ပို့ပေးလာနေပြီး၊ ဒါတွေကို သိမ်းဆည်း၊ သုံးသပ်တာတွေ လုပ်နေပါပြီ။
မေး ။ ။ လတ်တလော တကယ်ဖြစ်နေချိန်မှာ၊ အခုလို နည်းဗျူဟာအသင်တွေနဲ့၊ ချက်ချင်း အထောက်အထား အများကြီးကို စ ရအောင် လုပ်လာနိုင်တာက၊ နောက် တတိုင်းပြည်လုံးမှာလဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကို ခံစားနေကြရတာ ဆိုတော့လေ၊ ဒီတစ်ခေါက်အတွက်တော့ အလားအလာကောင်းပါ။ အဲ့ဒိတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေ ကူညီပို့ပေးနေသူတွေကို အဓိက ဘာပြောပြချင်ပါလဲ၊ ရှေ့ နေကြီး Koumjian ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ဆီ ပို့ပေးလာတဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောပြချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့အားလုံး သတ္တိရှိရှိ အခုလို လုပ်ဆောင်ပေးတာကို အများကြီး လေးစားမိပါတယ်။ ဆက်သွယ်လာသူအားလုံးအနေနဲ့ အထူးသတိထားပြီး ကိုယ့်လုံခြုံရေးကိုယ် ပထမဦးစားပေး စေချင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ဖက်လည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပါ။ ဒါကြောင်မို့ Signal ဖုန်းနံ့ပါတ်နဲ့၊ ProntonMail ကနေ ဆက်သွယ်ပို့ပေးဖို့ လုပ်ပေးထားတာပါ။ ဒါတွေက မူရင်းပို့တာကို Code အသွင်ပြောင်းပို့ပေးတာမို့ လုံခြုံပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆစ်ဂနယ်လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့ပို့နိုင်တဲ့ Application ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးတော့၊ ဖုန်းနံပါတ်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နံပါတ်ပေါ့နော်၊ နိုင်ငံ Code + (၄၁)၊ နောက် ဖုန်းနံပါတ် ၇၆ ၆၉၁ ၁၂ ၀၈ ကို ပို့ပေးဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) ခုနပြောတဲ့ ပရိုတွန်မေးလ် လိပ်စာ၊ mountain741@protonmail.com ကို အီးမေးလ်ပေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်တာကို IIMM အဖွဲ့ Website မှာတွေ့ပါတယ်။ ဒီ https://iimm.un.org Website ပေါ့နော်။
အခုလို ပို့တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို အထောက်အထားမျိုးဆိုရင်၊ ပြင်းထန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မူတွေအတွက်ပေါ့နော်၊ အခုဟာက လူမမယ် ကလေးငယ်လေးတွေကိုပါ ပစ်ခံထိ သေဆုံးနေရတာတွေပါ တွေ့လာနေရတော့၊ ဒီအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကို တာဝန်ယူ တာဝန်ခံလာနိုင်ရေး တရားမျှတမူ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပေါ့နော်၊ တကယ်တမ်း အထောက်အကူပြုလာနိုင်မလဲ။ ဘယ်လို အချက်အလက်မျိုးတွေ ပါနိုင်ရင် ပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ၊ နည်းနည်းအသေးစိတ်လေး ရှင်းအောင် ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် အထောက်အထား ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အခုရာဇဝတ်မူကို ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခံခဲ့ရတာ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်တိုင်သက်သေအဖြစ် ကြုံခဲ့ရတာတွေကို ထွက်ဆိုထားတာတွေလို၊ ခိုင်လုံတာမျိုးတွေပါပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို စတဲ့ ထင်သာမြင်သာတာတွေနဲ့ ဒီရာဇဝတ်မူတွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာက ဒဏ်ရာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားမျိုးတွေပေါ.။ ဒါပေမဲ့ ဒီပုံစံမျိးစုံထဲမှာ၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အထောက်အထားမျိုးကတော့၊ ဒီရာဇဝတ်မူအတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ခဲ့တာတွေပါ ပါလာတာမျိုးပါ။ ရာဇဝတ်မူ မြောက်စေတဲ့ / လက်တွေ့ကျုးလွန်စေတဲ့ အမိန့်မျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အထောက်အထားတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ အမိန့်မျိုးပေါ့။ ကျနော်တို့အခု အထူးစိုးရိမ်နေတာက၊ လူသေအလောင်းတွေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့၊ မကြာခင်က ကြိုးစားခဲ့တာမျိုးတွေပါ။ မိသားစုတွေအနေနဲ့ ဆေးစစ်ခွင့်မရ၊ တကယ့်ဒဏ်ရာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ခွင့် မရစေအောင်၊ မီးသဂြိုလ်လိုက်တာတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးနေသူတွေကို၊ သတိပေးချင်ပါတယ်၊ အခုလို လုပ်တာသက်သက်ကိုက၊ အပစ်ရှိတာသိတဲ့ စိတ်ဓာတ်သက်သက်ဖြစ်ပြီး၊ တာဝန်ရှိကြောင်း သက်သေအဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အခုလက်ရှိ ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မူတွေဖြစ်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ၊ ဒီ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေကို IIMM ဘက်ကလည်း၊ အများကြီး ကောက်ယူရရှိထားပြီးပြီဆိုတော့၊ ကနဦးတွေ့ရှိ သုံးသပ်ချက်တွေအရ၊ အရေးပါတာ ဘာတွေတွေပထားပြီးပြီလဲ၊ Mr. Koumjian ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမူက အစပိုင်း အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြည်သူတွေကို နားလည်စေချင်ပါတယ်၊ အခုလို ထောင်သောင်းချီတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးကိုပေါင်းပြီး၊ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မူအတွက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ရတာက၊ တကယ့်ကို လက်ဝင်ပြီး၊ အချိန်အကြာကြီး ယူရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အခုထိ တွေ့ထားရတာတွေအရတော့၊ အထူးစိုးရိမ်စရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ လူထောင်ဂဏန်းတွေနဲ့ချီပြီး မတရားဖမ်းဆီနေတဲ့ သဘောပါ။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ဒီလူတွေကို လာခေါ်ပြီးသွားရင်၊ သူတို့မိသားစုတွေ ရင်းနှီးသူတွေအနေနဲ့၊ သတင်းအချက်အလက် မရကြတော့ဘူး။ ဒါက လူမသိသူမသိ ပျောက်ဆုံးမူဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မူကြီးပါ။ နောက် အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ၊ ဖမ်းသွားတာလည်းပါတော့၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကြီးမားတဲ့ ရာဇဝတ်မှု Crime Against Humanity မြောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက် မိမိအသက် အန္တရာယ်မရှိဘဲ၊ သတ်ဖြတ်မူတွေကလည်း၊ အလားတူ ရာဇဝတ်မူမျိုးပါ။ ဒါ့အပြင်၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်၊ ညှုင်းပန်းနှိပ်စက်မူတွေကလည်း၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူပါပဲ။
မေး ။ ။ အခုလို အချိန်ယူပြီး နိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းးအရ အသေးစိတ်ရော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါ၊ အားလုံးကို ခြုံငုံမိအောင် စီစစ်သုံးသပ်တာတွေ လုပ်ဆောင်နေတာက၊ တချိန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ခုံရုံးတွေမှာ အသင့်သုံးနိုင်ဖို့၊ ရည်ရွယ်ထားတာဆိုတော့၊ ဘယ်လို ခုံရုံးလုပ်ငန်းစဉ်မျိူးတွေ အဓိက ဖြစ်လာဖို့ မှန်းဆထားတာပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ခုံရုံးလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ဖို့က ကျနော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ မရှိပါဘူး။ တခြားသူတွေ အဆိုပြုထားကြတာတွေတော့ ရှိနေပါပြီ၊ ကုလလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပြုထားတဲ့၊ အခုလို ရာဇဝတ်မူမျိုးကို ကိုယ်တွယ်နိုင်မယ့်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိတဲ့ တရားစီရင်ရေး ယန္တရားမျိုးပေါ့နော်။ ဒီအထဲမှာ ICC နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးကနေ၊ တခြားခုံရုံးတွေ အများကြီးအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့သလို၊ အခြေအနေတွေက ပြောင်းလဲလာနိုင်တာကို၊ ပြန်ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမကိုင်တွယ်ခင်တုံးက၊ ကမ္ဘောဒီးယားက ခမာနီခုံရုံးတွေမှာ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ အဲ့ဒိအလုပ်မျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာက၊ ဟိုး ၁၉၇၀ နှစ်တွေတုန်းက၊ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မူတွေကို ပြန်ကိုင်ရတာဗျ။ အဲ့ဒိတော့၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မူ ကျူးလွန်အောင် အမိန့်ပေးထားသူ ဘယ်သူမဆို၊ ဘယ်တော့မှ ကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီတရားမျှတမူရရေးက၊ နောက်ဆုံးတချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်အိမ်တံခါးအရောက် လာခေါက်မှာမို့ပါ။ တရားမျှတမူရရေးဆိုတာက၊ အကြာကြီးကို ဆက်ရှင်သန်နိုင်တာမျိုးပါ။
မေး ။ ။ ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမူ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေက ပြင်းထန်လေလေ၊ မေ့ပျောက်ဖို့ခက်လေလေ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတော့၊ အခုပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်နေတာတွေအတွက်၊ တရားမျှတမူပြန်ခံစားရနိုင်ဖို့ ဆန္ဒတွေကလည်း၊ အလားတူ ပြင်းထန်ပြီး၊ ဘယ်တော့မှ အိပ်စက် အနားယူသွားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ၊ အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရော အရေးကြီး အဓိက ဘာ မှာချင်သေးလဲ ရှေ့နေကြီး Koumjian ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကို ကျနော် အကြံပေးချင်တာ/ ပြန်သတိပြုစေချင်တာကတော့၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေ အခြေခံအချက်တွေပါ။ အထက်ကအမိန့်ကြောင့် ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေကို ကျူးလွန်ခဲ့ရတာပါလို့၊ ဆင်ခြေပေးလို့ မရပါဘူး။ တကယ်တာဝန်ရှိခဲ့တာက၊ ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မူမြောက်တဲ့အမိန့်ကို၊ လိုက်နာဖို့ငြင်းခဲ့ရမှာပါ။ နောက် အမိန့်ပေးနေသူတွေကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေအောက်မှာ၊ သူတို့ တကယ်တာဝန် ရှိတာက၊ ဒီရာဇဝတ်မူတွေ မဖြစ်အောင်နဲ့၊ အခုလို ရာဇဝတ်မူမှာ တာဝန်ရှိသူလာတွေကို အပြစ်ပေးနိုင်အောင် လိုအပ်တာ/ သင့်တော်တာ အားလုံးလုပ်ပေးဖို့ပါ။ လုပ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ရင်တော့၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအောက်မှာ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံရမူ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ နိုင်ငံတကာ တရားမျှတမူ ရှာဖွေရေးက သက်တမ်းရှည်ကြာတတ်ပါတယ်။”
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရော၊ ကမ္ဘာ့စာမျက်နှာမှာပါ၊ နေမဝင်နိုင်မဲ့ ဖျောက်ဖျက်မရမဲ့၊ တရားရေးမှတ်တမ်းတွေအဖြစ်၊ သမိုင်းဝင်အဆင့်အထိကိုတောင် ကမ္ဘာတည်သရွေ. အမှတ်ရနေနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးပေါနော်။ အဲ့ဒိတော့ နောက်ဆုံးရော အားလုံးကို အဓိက ဘာမှာချင်သေးလဲ နိုင်ငံတကာရှေ.နေကြီး Koumjian ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီအထောက်အထား စုဆောင်းသိမ်းဆည်းမူ လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်၊ ရိုးရိုးသားသား မျှော်လင့်မိတာရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမူ ရှိနိုင်တာကို ဖော်ဆောင်တာမို့၊ ဒီအချက်သက်သက်ကြောင့်ကိုပဲ၊ အနာဂတ်မှာ ရာဇဝတ်မူတွေ ဆက်မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးနိုင်မလားလို့၊ မျှော်လင့်မိတာမျိုးပါ။ အခုလို ရာဇဝတ်မူမြောက်တဲ့ အမိန့်ပေးခံရသူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီအမိန့်မျိုးတွေ ပေးနေသူတွေအနေနဲ့ မလုပ်ခင်မှာ၊ တစ်ချက်လေးတော့၊ ပြန်စဉ်းစားလာဖို့ပေါ့နော်။ သူတို့အနေနဲ့ ဒီလိုလိုက်နာမူမျိုး၊ အမိန့်ပေးမူမျိုး၊ လုပ်လိုက်မိရင်၊ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မူနဲ့ အရေးယူခံရနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရောက်နိုင် မနိုင်၊ တစ်ချက်လေး ပြန်ချင့်ချိန်လာတာမျိုးပေါ့နော်။ အဲ့ဒိလို ပြန်ချင့်ချိန်လိုက်မိရင်၊ သူတို့ ဒါမျိုးမလုပ်မိဖို့ တစ်ချက်လေး တွန့်သွားတာ၊ နောက်တွန့်သွားတာကနေ၊ တားဆီးလိုက်နိုင်တာမျိုးအထိ ဖြစ်သွားရင်တော့၊ အခုလို ရာဇဝတ်မူကြီးတွေ၊ ဘယ်တော့မှ၊ ပေါ်လာနိုင်မှာ၊ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကိုဝင်းမင်း ။ ။ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေ အမြန်ဆုံးပြည့်လာနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလို တကူးတက အချိန်ပေးပြီး၊ အသေးစိတ် ရှင်းအောင် အားလုံးအတွက် ရှင်းပြခဲ့လို့လည်း၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ရှေ့နေကြီး Koumjian ခင်ဗျာ။
လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမူ စုံစမျးစဈဆေးမှုယန်တရား
မွနျမာစဈအာဏာသိမျးဆနျ့ကငျြ ဆန်ဒပွမူတှအေပျေါ ပဈခတျနှိမျနငျးမူတှေ ပိုပိုပွငျးထနျလာခြိနျမှာ၊ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးမှုယန်တရား (Independent Investigative Mechanism for Myanmar - IIMM) အကွီးအကဲက၊ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမူမှတျတမျးမြားစှာကို လကျခံရရှိထားပွီးပွီမို့၊ တာဝနျရှိသူတှေ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူ ကြူးလှနျနိုငျတာကို ပွနျစဉျးစားသငျ့ပါပွီလို့ သတိပေးလိုကျပါတယျ။
ပွညျပ (သို့မဟုတျ) ပွညျတှငျခုံရုံးတှမှော တရားစှဲနိုငျခြိနျအတှကျ ရညျရှယျပွီး၊ ဒီမှတျတမျးတှေ ဆကျလကျစုဆောငျးနရောမှာ၊ မွနျမာနိုငျထဲ ဝငျခှငျ့မရခြိနျ ပွညျထဲကနေ ပို့ပေးသူတှကေို၊ IIMM အဖှဲ့အကွီးအကဲ Nicholas Koumjian က ခြီးကြူးလိုကျပွီး၊၊ တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့တော့၊ လူသအေလောငျးလို အထောကျအထားတှကေို ဖြောကျဖကျြနတောကိုက အပွဈရှိတဲ့ သကျသခေံခကျြ ဖွဈတယျလို့ ထောကျပွလိုကျပါတယျ။
နိုငျငံတကာရှနေ့ကွေီးလညျးဖွဈတဲ့ Mr. Koumjian က၊ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူဆိုငျရာ တရားမြှတမူ ဖျောဆောငျရေးက၊ သကျတမျး ဘယျတော့မှမကုနျဘဲ၊ အမွဲအမှတျရစရာတှေ ကနျြနခေဲ့မှာမို့၊ တာဝနျရှိသူတှေ တခြိနျခြိနျမှာ အရေးယူခံရနိုငျတာကို၊ သတိပွုထားသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက သီးသနျ့မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ IIMM အဖှဲ့အကွီးအကဲ Nicholas Koumjian ခငျဗြာ၊ အလုပျတှေ မြားနတေဲ့ကွားက၊ VOA ကို အခုလို အခြိနျပေးပွီး၊ သီးသနျ့အငျတာဗြူး ကိုယျတိုငျ ဖွပေေးတဲ့အတှကျ၊ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ။
ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ဒီ IIMM မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးမှု ယန်တရားကို တကယျက ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာထဲက၊ ဖှဲ့စညျးပေးခဲ့တာပေါ့နျော။ အရငျစစခငျြးတုနျးကတော့၊ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော အဓိက ဖွဈခဲ့တဲ့၊ ကွီးလေးတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမူ အခကျြအလကျတှကေို ကောကျယူစဈဆေးပေးဖို့ဆိုပွီး စဖွဈလာခဲ့တာပေါ့နျော၊ ဒါပမေဲ့ အခုတော့၊ ဖဖေျောဝါရီ (၁) ရကျ စဈအာဏာသိမျးအပွီး၊ မွနျမာပွညျက အဓိကမွို့ကွီးတှအေပါအဝငျ၊ တတိုငျးပွညျလုံးမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့နဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ လတျတလော ဖွဈလာနတေဲ့၊ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမူ အခကျြအလကျတှေ ကောကျယူမှာဆိုတော့၊ အခုတဈခေါကျမှာ ထိရောကျလာနိုငျမူ အလားအလာကို ဘယျလို မြှျောမှနျးမိလဲ။
ဖွေ ။ ။ IIMM ရဲ့ထိရောကျမူက အခွအေနေ အမြားကွီးပျေါ မူတညျနပေါတယျ။ ဒါတှကေ ဆုံးဖွတျလို့ မရသေးပါဘူး။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောရရငျတော့ ကနြျောတို့အဖှဲ့လုပျပိုငျခှငျ့ထကျကို ကြျောနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ရှိထားတဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့ကတော့၊ အထောကျအထားတှေ ကောကျယူမယျ။ အခု မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ ကြုးလှနျခဲ့တဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ နိုငျငံတကာ ဥပဒခြေိုးဖောကျမူတှအေပျေါ အရေးယူနိုငျခှငျ့ရှိနတေဲ့၊ ဒါမှမဟုတျ တနနေ့မှေ့ာ အရေးယူဖို့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့၊ ပွညျတှငျး (ဒါမှမဟုတျ) နိုငျငံတကာခုံရုံးတှအေတှကျ၊ အသငျ့၊ မပြောကျပကျြအောငျ ထိနျးသိမျးပေးထားမယျ။ အခု ဒီလုပျငနျးစဉျအဆငျ့ထဲမှာ ရောကျနပေါပွီ၊ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ အထောကျအထားတှေ ကောကျယူလာနပေါတယျ။
မေး ။ ။ တကယျ့ကို ကွီးမားတဲ့ လုပျငနျးစဉျကွီးပါ။ အဲ့ဒီတော့ အခုလို အခကျြအလကျ ကောကျယူတာမှာ၊ ခိုငျမာတဲ့ အထောကျအထားမြိုး ရဖို့ဆိုတာက၊ တိုကျရိုကျဖွဈခဲ့တဲ့ နရောတှကေိုသှားပွီး၊ ကောကျယူနိုငျရငျ ပိုအားကောငျးနိုငျတာပေါ့နော၊ျ ဒါပမေဲ့ လကျရှိမှာက၊ မွနျမာနိုငျငံထဲ ဝငျခှငျ့ရောကျခှငျ့ကို လကျရှိ စဈကောငျစီကလညျး၊ ဆကျလကျပိတျပငျထားတယျဆိုတော့၊ ဘယျလို စိနျချေါမူတှေ ရငျဆိုငျနရေလဲ။
ဖွေ ။ ။ သခြောတာပေါ့ အခုလို ကောကျယူဖို့အတှကျ ခကျသှားပါတယျ။၊ မွနျမာအစိုးရရဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမူ မရှိတာကွောငျ့၊ ကနြျောတို့ အခကျကွုံရပါတယျ။ ကနြျောတို့ နိုငျငံထဲကို မသှားနိုငျဘူး၊ ရာဇဝတျမူ ကြုးလှနျခဲ့တဲ့နရောတှေ၊ မွနျမာနိုငျငံထဲ ရှိနသေေးတဲ့ သကျသတှေကေို လကျလှမျးမမှီနိုငျဘူး။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံထဲကို လာခှငျ့ပွုဖို့တော့၊ ဆကျလကျတောငျးဆိုထားဆဲပါ။ ကုလလူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီကလညျး ဒီအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပေးဖို့၊ မွနျမာဘကျကို တောငျးဆိုထားပါတယျ။ ကနြျောတို့ အမွဲမမရေ့မှာက၊ အခွအေနတှေကေ အမွဲပွောငျးသှားတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီတော့ အခုအရေးတကွီး လုပျဖို့လိုတဲ့၊ အထောကျအထားကောကျယူ၊ သိမျးဆညျးမူလုပျငနျးကို၊ ရရှေညျတှကျပွီးတော့ကို လုပျနတောပါ၊။
မေး ။ ။ အခုလို ရရှေညျမြှျောမှနျးခကျြနဲ့ လုပျဆောငျနတောဆိုတော့၊ ဘယျတော့လောကျမှာပေါ့နျော၊ မွနျမာနိုငျငံထဲကို ဝငျခှငျ့ရဖို့ကိုရော၊ ဘယျလောကျထိ၊ မြှျောလငျ့ထားလဲ၊ နိုငျငံတကာရှနေ့ကွေီး Koumjian ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ ။ ဒါကလညျး၊ တခွားအခကျြတှေ အမြားကွီးပျေါ မူတညျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လုပျပိုငျခှငျ့ကို ကြျောနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဘကျကတော့ မွနျမာနိုငျငံထဲလာခှငျ့ပေးဖို့၊ လှနျခဲ့တဲ့ (၂) နှဈ အတှငျး အခွအေနမြေိုးစုံအောကျမှာ တောငျးဆိုလာခဲ့ပါတယျ။ အခုလဲ အလားတူ ဆကျတောငျးဆိုသှားမှာပါ။ ဒါက မွနျမာနိုငျငံထဲ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အခွအေနတှေပေျေါမှာ အမြားကွီး မူတညျနပေါတယျ။
မေး ။ ။ အဲ့ဒီတော့ အခုလကျရှိ ဝငျခှငျ့မရတဲ့အတှကျ၊ ဘယျလို သကျရောကျမူတှေ ရှိနပွေီးတော့၊ ဘယျလို ရှဆေ့ကျလုပျဆောငျသှားဖို့ ကြျောလှားသှားနိုငျဖို့ရော၊ ပွငျဆငျထားပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ မွနျမာနိုငျငံထဲကို သှားခှငျ့မရတာက အခကျအခဲ ပိုဖွဈစတော ရှငျးပါတယျ။ ဖွဈနတေဲ့ နယျမွတှေေ၊ အခြိုးဖောကျခံရသူတှနေဲ့ တိုကျရိုကျမရတဲ့အခါကွတော့လေ။ ဒါပမေဲ့ အခုလို ဖွဈတာက နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူဥပဒကွေောငျးမှာ ထူးထူးခွားခွားတော့ မဟုတျပါဘူး။ အစိုးရတှကေ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမူ မရှိတဲ့အခါ၊ နိုငျငံတကာ တရားမြှတမူအတှကျ ကွိုးပမျးမူတှေ အခကျကွုံရတတျပါတယျ။ ဒါတှကေို ကြျောလှားနိုငျဖို့ မဟာဗြူဟာနညျးသဈတှနေဲ့ ကွိုးစားနပေါတယျ။ အခုက၊ မွနျမာနိုငျငံက လူတှနေဲ့အဖှဲ့အစညျးတှပေေါငျး ထောငျဂဏနျးတှနေဲ့ ခြီပွီးကို၊ အထောကျအထားတှေ ပို့ပေးလာနပွေီး၊ ဒါတှကေို သိမျးဆညျး၊ သုံးသပျတာတှေ လုပျနပေါပွီ။
မေး ။ ။ လတျတလော တကယျဖွဈနခြေိနျမှာ၊ အခုလို နညျးဗြူဟာအသငျတှနေဲ့၊ ခကျြခငျြး အထောကျအထား အမြားကွီးကို စ ရအောငျ လုပျလာနိုငျတာက၊ နောကျ တတိုငျးပွညျလုံးမှာလဲ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ကို ခံစားနကွေရတာ ဆိုတော့လေ၊ ဒီတဈခေါကျအတှကျတော့ အလားအလာကောငျးပါ။ အဲ့ဒိတော့ မွနျမာနိုငျငံထဲကနေ ကူညီပို့ပေးနသေူတှကေို အဓိက ဘာပွောပွခငျြပါလဲ၊ ရှနေ့ကွေီး Koumjian ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ ။ ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကနြျောတို့ဆီ ပို့ပေးလာတဲ့သူ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျစကား ပွောပွခငျြပါတယျ။ မိတျဆှတေို့အားလုံး သတ်တိရှိရှိ အခုလို လုပျဆောငျပေးတာကို အမြားကွီး လေးစားမိပါတယျ။ ဆကျသှယျလာသူအားလုံးအနနေဲ့ အထူးသတိထားပွီး ကိုယျ့လုံခွုံရေးကိုယျ ပထမဦးစားပေး စခေငျြပါတယျ။ ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျး အလုံခွုံဆုံးဖွဈဖို့၊ ကြှနျတျောတို့ဖကျလညျး အစှမျးကုနျကွိုးစားမှာပါ။ ဒါကွောငျမို့ Signal ဖုနျးနံ့ပါတျနဲ့၊ ProntonMail ကနေ ဆကျသှယျပို့ပေးဖို့ လုပျပေးထားတာပါ။ ဒါတှကေ မူရငျးပို့တာကို Code အသှငျပွောငျးပို့ပေးတာမို့ လုံခွုံပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆဈဂနယျလို့ချေါတဲ့ ဖုနျးမကျဆပေို့နိုငျတဲ့ Application ကို ဒေါငျးလုပျ လုပျပွီးတော့၊ ဖုနျးနံပါတျက ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ နံပါတျပေါ့နျော၊ နိုငျငံ Code + (၄၁)၊ နောကျ ဖုနျးနံပါတျ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂ ၀၈ ကို ပို့ပေးဖို့ (ဒါမှမဟုတျ) ခုနပွောတဲ့ ပရိုတှနျမေးလျ လိပျစာ၊ mountain741@protonmail.com ကို အီးမေးလျပေးပို့ပွီး ဆကျသှယျနိုငျတာကို IIMM အဖှဲ့ Website မှာတှပေ့ါတယျ။ ဒီ https://iimm.un.org Website ပေါ့နျော။
အခုလို ပို့တဲ့နရောမှာ ဘယျလို အထောကျအထားမြိုးဆိုရငျ၊ ပွငျးထနျတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမူတှအေတှကျပေါ့နျော၊ အခုဟာက လူမမယျ ကလေးငယျလေးတှကေိုပါ ပဈခံထိ သဆေုံးနရေတာတှပေါ တှလေ့ာနရေတော့၊ ဒီအတှကျ တာဝနျရှိသူတှကေို တာဝနျယူ တာဝနျခံလာနိုငျရေး တရားမြှတမူ လုပျငနျးစဉျအတှကျပေါ့နျော၊ တကယျတမျး အထောကျအကူပွုလာနိုငျမလဲ။ ဘယျလို အခကျြအလကျမြိုးတှေ ပါနိုငျရငျ ပိုကောငျးနိုငျတယျဆိုတာ၊ နညျးနညျးအသေးစိတျလေး ရှငျးအောငျ ပွောပွပေးပါလား။
ဖွေ ။ ။ အထောကျအကူပွုနိုငျမယျ့ အထောကျအထား ပုံစံမြိုးစုံရှိပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ အခုရာဇဝတျမူကို ကိုယျတိုငျကြူးလှနျခံခဲ့ရတာ (ဒါမှမဟုတျ) ကိုယျတိုငျသကျသအေဖွဈ ကွုံခဲ့ရတာတှကေို ထှကျဆိုထားတာတှလေို၊ ခိုငျလုံတာမြိုးတှပေါပါတယျ။ ဓာတျပုံ၊ ဗီဒီယို စတဲ့ ထငျသာမွငျသာတာတှနေဲ့ ဒီရာဇဝတျမူတှေ၊ ကိုယျခန်ဓာက ဒဏျရာတှကေို မှတျတမျးတငျထားမြိုးတှပေေါ.။ ဒါပမေဲ့ ဒီပုံစံမြိးစုံထဲမှာ၊ တနျဖိုးအရှိဆုံး အထောကျအထားမြိုးကတော့၊ ဒီရာဇဝတျမူအတှကျ ဘယျလို ပွငျဆငျခဲ့တာတှပေါ ပါလာတာမြိုးပါ။ ရာဇဝတျမူ မွောကျစတေဲ့ / လကျတှကြေု့းလှနျစတေဲ့ အမိနျ့မြိုး၊ ဒါမှမဟုတျ အထောကျအထားတှကေို ဖကျြဆီးပဈဖို့ အမိနျ့မြိုးပေါ့။ ကနြျောတို့အခု အထူးစိုးရိမျနတောက၊ လူသအေလောငျးတှကေို ဖြောကျဖကျြဖို့၊ မကွာခငျက ကွိုးစားခဲ့တာမြိုးတှပေါ။ မိသားစုတှအေနနေဲ့ ဆေးစဈခှငျ့မရ၊ တကယျ့ဒဏျရာတှကေို မှတျတမျးတငျခှငျ့ မရစအေောငျ၊ မီးသဂွိုလျလိုကျတာတှေ ကွားခဲ့ရပါတယျ။ အခုလို ဖြောကျဖကျြပဈဖို့ အမိနျ့ပေးနသေူတှကေို၊ သတိပေးခငျြပါတယျ၊ အခုလို လုပျတာသကျသကျကိုက၊ အပဈရှိတာသိတဲ့ စိတျဓာတျသကျသကျဖွဈပွီး၊ တာဝနျရှိကွောငျး သကျသအေဖွဈ သုံးနိုငျပါတယျ။
မေး ။ ။ အခုလကျရှိ ဒီလူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမူတှဖွေဈနတေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ၊ ဒီ အထောကျအထား အခကျြအလကျတှကေို IIMM ဘကျကလညျး၊ အမြားကွီး ကောကျယူရရှိထားပွီးပွီဆိုတော့၊ ကနဦးတှရှေိ့ သုံးသပျခကျြတှအေရ၊ အရေးပါတာ ဘာတှတှေပေထားပွီးပွီလဲ၊ Mr. Koumjian ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ရဲ့ စုံစမျးစဈဆေးမူက အစပိုငျး အဆငျ့မှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ပွညျသူတှကေို နားလညျစခေငျြပါတယျ၊ အခုလို ထောငျသောငျးခြီတဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ အားလုံးကိုပေါငျးပွီး၊ နိုငျငံတကာရာဇဝတျမူအတှကျ စဈဆေးသုံးသပျရတာက၊ တကယျ့ကို လကျဝငျပွီး၊ အခြိနျအကွာကွီး ယူရလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့၊ ကနြျောတို့အနနေဲ့ အခုထိ တှထေ့ားရတာတှအေရတော့၊ အထူးစိုးရိမျစရာတှေ ရှိနပေါတယျ။ လူထောငျဂဏနျးတှနေဲ့ခြီပွီး မတရားဖမျးဆီနတေဲ့ သဘောပါ။ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှကေ ဒီလူတှကေို လာချေါပွီးသှားရငျ၊ သူတို့မိသားစုတှေ ရငျးနှီးသူတှအေနနေဲ့၊ သတငျးအခကျြအလကျ မရကွတော့ဘူး။ ဒါက လူမသိသူမသိ ပြောကျဆုံးမူဆိုငျရာ နိုငျငံတကာရာဇဝတျမူကွီးပါ။ နောကျ အကွောငျးပွခကျြမပေးဘဲ၊ ဖမျးသှားတာလညျးပါတော့၊ လူသားမြိုးနှယျအပျေါ ကွီးမားတဲ့ ရာဇဝတျမှု Crime Against Humanity မွောကျနိုငျပါတယျ။ နောကျ မိမိအသကျ အန်တရာယျမရှိဘဲ၊ သတျဖွတျမူတှကေလညျး၊ အလားတူ ရာဇဝတျမူမြိုးပါ။ ဒါ့အပွငျ၊ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားစဉျ၊ ညှုငျးပနျးနှိပျစကျမူတှကေလညျး၊ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူပါပဲ။
မေး ။ ။ အခုလို အခြိနျယူပွီး နိုငျငံတကာဥပဒကွေောငျးးအရ အသေးစိတျရော ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ပါ၊ အားလုံးကို ခွုံငုံမိအောငျ စီစဈသုံးသပျတာတှေ လုပျဆောငျနတောက၊ တခြိနျဖွဈလာနိုငျတဲ့ ခုံရုံးတှမှော အသငျ့သုံးနိုငျဖို့၊ ရညျရှယျထားတာဆိုတော့၊ ဘယျလို ခုံရုံးလုပျငနျးစဉျမြိူးတှေ အဓိက ဖွဈလာဖို့ မှနျးဆထားတာပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ခုံရုံးလုပျငနျးစဉျ စတငျဖို့က ကနြျောတို့ လုပျပိုငျခှငျ့ထဲမှာ မရှိပါဘူး။ တခွားသူတှေ အဆိုပွုထားကွတာတှတေော့ ရှိနပေါပွီ၊ ကုလလူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ မွနျမာကိုယျစားလှယျက အဆိုပွုထားတဲ့၊ အခုလို ရာဇဝတျမူမြိုးကို ကိုယျတှယျနိုငျမယျ့၊ ဖွဈနိုငျခွလေညျးရှိတဲ့ တရားစီရငျရေး ယန်တရားမြိုးပေါ့နျော။ ဒီအထဲမှာ ICC နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျခုံရုံးကနေ၊ တခွားခုံရုံးတှေ အမြားကွီးအထိ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောအရငျပွောခဲ့သလို၊ အခွအေနတှေကေ ပွောငျးလဲလာနိုငျတာကို၊ ပွနျထောကျပွခငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ မွနျမာနိုငျငံကိစ်စမကိုငျတှယျခငျတုံးက၊ ကမ်ဘောဒီးယားက ခမာနီခုံရုံးတှမှော တာဝနျယူခဲ့ပါတယျ၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ အဲ့ဒိအလုပျမြိုးတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာက၊ ဟိုး ၁၉၇၀ နှဈတှတေုနျးက၊ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ရာဇဝတျမူတှကေို ပွနျကိုငျရတာဗြ။ အဲ့ဒိတော့၊ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမူ ကြူးလှနျအောငျ အမိနျ့ပေးထားသူ ဘယျသူမဆို၊ ဘယျတော့မှ ကောငျးကောငျးအိပျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီတရားမြှတမူရရေးက၊ နောကျဆုံးတခြိနျခြိနျမှာ ကိုယျ့အိမျတံခါးအရောကျ လာခေါကျမှာမို့ပါ။ တရားမြှတမူရရေးဆိုတာက၊ အကွာကွီးကို ဆကျရှငျသနျနိုငျတာမြိုးပါ။
မေး ။ ။ ဒီလူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရမူ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှကေ ပွငျးထနျလလေေ၊ မပြေ့ောကျဖို့ခကျလလေေ ဖွဈတတျတဲ့သဘောရှိတော့၊ အခုပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖွဈနတောတှအေတှကျ၊ တရားမြှတမူပွနျခံစားရနိုငျဖို့ ဆန်ဒတှကေလညျး၊ အလားတူ ပွငျးထနျပွီး၊ ဘယျတော့မှ အိပျစကျ အနားယူသှားမှာ မဟုတျဘူး၊ ဘယျတော့မှ မမဘေူ့းဆိုတဲ့ သဘောဖွဈတာပေါ့နျော။ အဲ့ဒီတော့ ဒီနရောမှာ၊ အဓိက တာဝနျရှိတဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှရေော အရေးကွီး အဓိက ဘာ မှာခငျြသေးလဲ ရှနေ့ကွေီး Koumjian ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ ။ လုံခွုံရေးအဖှဲ့တှကေို ကနြျော အကွံပေးခငျြတာ/ ပွနျသတိပွုစခေငျြတာကတော့၊ နိုငျငံတကာဥပဒေ အခွခေံအခကျြတှပေါ။ အထကျကအမိနျ့ကွောငျ့ ဒီနိုငျငံတကာဥပဒကေို ကြူးလှနျခဲ့ရတာပါလို့၊ ဆငျခွပေေးလို့ မရပါဘူး။ တကယျတာဝနျရှိခဲ့တာက၊ ဒီနိုငျငံတကာရာဇဝတျမူမွောကျတဲ့အမိနျ့ကို၊ လိုကျနာဖို့ငွငျးခဲ့ရမှာပါ။ နောကျ အမိနျ့ပေးနသေူတှကေိုလညျး ပွောခငျြပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ဥပဒတှေအေောကျမှာ၊ သူတို့ တကယျတာဝနျ ရှိတာက၊ ဒီရာဇဝတျမူတှေ မဖွဈအောငျနဲ့၊ အခုလို ရာဇဝတျမူမှာ တာဝနျရှိသူလာတှကေို အပွဈပေးနိုငျအောငျ လိုအပျတာ/ သငျ့တျောတာ အားလုံးလုပျပေးဖို့ပါ။ လုပျပေးဖို့ ပကျြကှကျခဲ့ရငျတော့၊ နိုငျငံတကာ ဥပဒအေောကျမှာ တာဝနျယူ၊ တာဝနျခံရမူ ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ အရငျပွောခဲ့သလိုပဲ၊ နိုငျငံတကာ တရားမြှတမူ ရှာဖှရေေးက သကျတမျးရှညျကွာတတျပါတယျ။”
မေး ။ ။ မွနျမာနိုငျငံထဲမှာရော၊ ကမ်ဘာ့စာမကျြနှာမှာပါ၊ နမေဝငျနိုငျမဲ့ ဖြောကျဖကျြမရမဲ့၊ တရားရေးမှတျတမျးတှအေဖွဈ၊ သမိုငျးဝငျအဆငျ့အထိကိုတောငျ ကမ်ဘာတညျသရှေ. အမှတျရနနေိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုးပေါနျော။ အဲ့ဒိတော့ နောကျဆုံးရော အားလုံးကို အဓိက ဘာမှာခငျြသေးလဲ နိုငျငံတကာရှေ.နကွေီး Koumjian ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ဒီအထောကျအထား စုဆောငျးသိမျးဆညျးမူ လုပျငနျးစဉျကနတေဆငျ့၊ ရိုးရိုးသားသား မြှျောလငျ့မိတာရှိပါတယျ။ ဒီလုပျငနျးစဉျက လူတဈဦးခငျြးစီရဲ့ တာဝနျယူ တာဝနျခံမူ ရှိနိုငျတာကို ဖျောဆောငျတာမို့၊ ဒီအခကျြသကျသကျကွောငျ့ကိုပဲ၊ အနာဂတျမှာ ရာဇဝတျမူတှေ ဆကျမဖွဈအောငျ တားဆီးပေးနိုငျမလားလို့၊ မြှျောလငျ့မိတာမြိုးပါ။ အခုလို ရာဇဝတျမူမွောကျတဲ့ အမိနျ့ပေးခံရသူတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ ဒီအမိနျ့မြိုးတှေ ပေးနသေူတှအေနနေဲ့ မလုပျခငျမှာ၊ တဈခကျြလေးတော့၊ ပွနျစဉျးစားလာဖို့ပေါ့နျော။ သူတို့အနနေဲ့ ဒီလိုလိုကျနာမူမြိုး၊ အမိနျ့ပေးမူမြိုး၊ လုပျလိုကျမိရငျ၊ နိုငျငံတကာရာဇဝတျမူနဲ့ အရေးယူခံရနိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုး ရောကျနိုငျ မနိုငျ၊ တဈခကျြလေး ပွနျခငျြ့ခြိနျလာတာမြိုးပေါ့နျော။ အဲ့ဒိလို ပွနျခငျြ့ခြိနျလိုကျမိရငျ၊ သူတို့ ဒါမြိုးမလုပျမိဖို့ တဈခကျြလေး တှနျ့သှားတာ၊ နောကျတှနျ့သှားတာကနေ၊ တားဆီးလိုကျနိုငျတာမြိုးအထိ ဖွဈသှားရငျတော့၊ အခုလို ရာဇဝတျမူကွီးတှေ၊ ဘယျတော့မှ၊ ပျေါလာနိုငျမှာ၊ မဟုတျတော့ဘူးပေါ့ဗြာ။
ကိုဝငျးမငျး ။ ။ ဒီမြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမွနျဆုံးပွညျ့လာနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ အခုလို တကူးတက အခြိနျပေးပွီး၊ အသေးစိတျ ရှငျးအောငျ အားလုံးအတှကျ ရှငျးပွခဲ့လို့လညျး၊ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ရှနေ့ကွေီး Koumjian ခငျဗြာ။